ချူးဆွန်းဘုရားကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်အကောင်းဆုံးမြေပုံ ZEKKEI Japan
ကမ္ဘာမှမသိသေးသော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဒေသများအား ခရီးသွားဒေသများဖြစ်စေရန်
ဆာပိုလို . အိုတာရု
ဖူရာနို ဘီအဲအိ ဘွန်းကရော
မိအဲ . အိဆဲရှိမ
ဖုကုအိုခ . ဟာခတ
အမျိုးအစားများ Autumn leaves Cherry blossoms Snow Festivals Fireworks Sunrise Sunset Night views Illumination Traditional Mysterious Fresh Colorful Relaxing World Heritage Hot springs Parks Temples/shrines Castles Historic towns
ဒေသများ ဆာပိုလို . အိုတာရု ဟကိုတဒဲ ဖူရာနို ဘီအဲအိ ဘွန်းကရော ဟိုကိုင်းဒိုး ဆန်းဒိုင်း မဆုရှိမား ဆန်းဒိုင်း မဆုရှိမား ဖူကူရှီမား အအိုမိုရိ အာခိတ အိဝတဲ ယာမဂတ တိုကျို ကာမာကူရ ဟခိုးနဲ ယော်ကိုဟားမ နီကိုး၊ကီနုဂါဝ တိုချိဂိ ဂွန်းမ ချိဘ အီဘရဂိ စိုင်းတမ ကာမာကူရ ဖူဂျီရာမ ဟီဒတာကရာမ ခနဇဝ ယာမာနာရှီ ယာမာနာရှီ ခရုအိဇဝ နဂနော့ နီအိဂတ တိုးယာမ၊ကူရိုဘဲ၊တာတဲရာမ အိရှိဂါဝ ဖုခုအိ ဂိဖု အာအိချိ ကျိုတို အိုဆာကာ နရ ဟရောဂေါ့ ကိုးဘဲ ရှိဂ ဘီဝခို ဝဂယမ မိအဲ . အိဆဲရှိမ ဟီရိုရှီးမား မီယဂျီးမား အိုခယာမ ရှိမနဲ တို့ တိုရိ ယာမဂူချိ ခဂါဝ တိုခုရှိမ ခိုးချိ အဲဟိမဲ ဖုကုအိုခ . ဟာခတ အိုအိတ ဘဲ့ပု ခုမမိုတို မိယဇခိ ခါဂိုရှိမ ဆဂ နာဂဆာကီ အိုခီနာဝါ
လ သုံးလပိုင်း လေးလပိုင်း ငါးလပိုင်း ခြောက်လပိုင်း ခုနှစ်လပိုင်း ရှစ်လပိုင်း ကိုးလပိုင်း ဆယ်လပိုင်း ဆယ့်တစ်လပိုင်း ဆယ့်နှစ်လပိုင်း တစ်လပိုင်း နှစ်လပိုင်း
လက်ရှိဒေသရှာဖွေမှုသည် နေရာသတင်းအချက်အလက် ဝန်ဆောင်မှုကို Onလုပ်ထားပါက သုံးနိုင်ပါသည်။
ZEKEEI Japan ၏ အဓိကကျသော
ကမ္ဘာမှမသိသေးသော ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဒေသများအား ခရီးသွားဒေသများဖြစ်စေရန် ZEKKEIဆိုသည်မှာ ( ဂျပန်နိုင်ငံ၏လှပသောရှုခင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု) ကို ဖော်ဆောင်ပါသည်။ (ZEKKEI Japan )တွင် ကျွမ်းကျင်ဓာတ်ပုံဆရာမှ ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံများမှတဆင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ဒေသများ၏ လှပမှုကို ကမ္ဘာသိအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်း